N'oge ọ bụla ị chọrọ ka ebipụ ma ọ bụ kewaa ọkacha mmasị gị okpokolo agba si a nkiri, i kwesịrị a ịdabere na ngwa na-adịghị imebi àgwà nke gị video. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke n'elu 5 free WMV splitters.
Windows Movie Onye kere
Windows Movie bu Onye meworo a free ngwa na awade dị iche iche bara uru video edezi ọrụ maka windows ọrụ. Na ya, i nwere ike iji aka gbawara n'etiti video na ọdịyo mkpachị n'ime nta mkpachị mee ka gị na Obere vidiyo mfe-arụ ọrụ na. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka WMV, MP4, MTS, M2T .AVI. MOV na ndị ọzọ.
Dị iche iche video edezi nhọrọ.
Mkpọka a otutu;
Nwere nsụgharị dị iche iche maka otu ngwaahịa.
Movica bụ a free oghe isi video edezi ngwá ọrụ. Ọ na-akwado dị iche iche formats dị ka MPEG-1, MPEG2, WMV, MP3, AVI, OGG, WAV na WMA. Movica-enye gị ohere kewaa faịlụ dị ka oge si set, ọnụ ọgụgụ nke iberibe, ma ọ bụ site size nke onye iberibe, nke osobo dị iche iche kewara chọrọ.
Enyere gị ịzọpụta akụkụ nke a video kewaa na-dezie.
Nwere iji wụnye Windows Media Player na kọmputa gị.
HJSplit bụ ngwa na-eji na-kewaa nnukwu nkiri faịlụ n'ime nta footage dị iche iche iche iche nke formats. Usoro ihe omume dị na Windows, Linux na a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ na nyiwe. Na ya, ị nwere ike mfe kewaa gị faịlụ n'ime akụkụ mgbe ọ bụla size ị chọrọ.
Na-akwado ọtụtụ nyiwe;
Nwere obere size nke dị nnọọ 306KB;
Ị na-adịghị iji wụnye ya.
Imewe bụ bụghị akpali nnọọ mmasị.
Video toolbox bụ ihe online video edezi ngwá ọrụ nke nwere ọgaranya set nke video ngwaọrụ. Iji jiri video edezi ngwaọrụ, ị ga-aha (ọ bụ free). The menu na ekpe depụtara niile na ọrụ. Ịcha videos n'ime nta akụkụ-abịa na abụọ ụdịdị "Mfe" na "Advanced". Ma dị ka ọtụtụ online ngwa, Video toolbox eweta a size mmachi nke 300MB n'ihi na gị video faịlụ.
Ekwe gị faịlụ nha ka dị nnọọ 300MB.
Format Factory bụ a bụghị nanị na a na-apụta video na ọdịyo Ntụgharị, kamakwa ezi video nchịkọta akụkọ na subset ngwaọrụ na aka faịlụ kewara. Gbawaa video, dị nnọọ họrọ gị video faịlụ, setịpụrụ clip nso na a mmalite oge na ọgwụgwụ oge na mgbe ahụ ị pụrụ ịmalite na usoro ozugbo.
Akwado iche iche video usoro.
Ya 37,7 MB download size nwere ike ịbụ ịrịba n'ihi na ụfọdụ na usoro.
Wondershare Video Editor Bụ ezigbo video edezi software usoro ihe omume ma Windows na Mac. Nke a ngwa-akwado isi iyi video faịlụ na-ewu ewu formats, dị ka WMV, MP4, AVI, MPEG, MOV, nakwa dị ka ụfọdụ HD formats, dị ka MKV na AVCHD. Na ya, ị nwere ike ọ bụghị naanị gbawara n'etiti, kamakwa ewepụtụ na bee video faịlụ. The iche iche netiti ndi Filiks bụ obere, ma ọ dị mma ka ha n'ime otu ngwa.